Ny vondrona Superunion dia orinasa manokana amin'ny famokarana sy fivarotana kojakoja ara-pitsaboana sy fitaovana ara-pitsaboana, miasa amin'ny indostrian'ny fitsaboana nandritra ny 20 taona mahery.Ny orinasanay dia naorina tamin'ny 1993, ary nanomboka nanatsara ny famokarana fitaovana tamin'ny 2005 ary nanatsara ny fahaizan'ny mpiasa.Amin'izao fotoana izao, efa vita ny famokarana mandeha ho azy.Ny faritry ny orinasa dia mihoatra ny 8000 metatra toradroa.
Manana tsipika vokatra marobe izahay, toy ny gauze ara-pitsaboana, bandy, kasety ara-pitsaboana, landihazo ara-pitsaboana, vokatra tsy voatenona ara-pitsaboana, syringe, catheter, kojakoja fandidiana ary fitaovana ara-pitsaboana hafa.
Nisoratra anarana marika telo izahay: SUGAMA, ZHUOHE ary WLD. Tamin'ny 2012, nanangana orinasa roa fanafarana sy fanondranana izahay, Yangzhou Super Union Import & Export Co., Ltd. ary Jiangsu WLD Medical Co., Ltd.
Nanondrana karazana vokatra ara-pitsaboana mihoatra ny 300 izahay. Ny ekipan'ny serivisy dia manana olona 50 mahery ary nanompo toeram-pitsaboana sy fivarotam-panafody any amin'ny firenena 100 mahery.Toa an'i Chili, Venezoela, Peroa ary Ekoatera any Amerika Atsimo, Emirà Arabo Mitambatra, Arabia Saodita ary Libya any Afovoany Atsinanana, Ghana, Kenya ary Nizeria any Afrika, Malezia, Thailandy, Mongolia ary Filipina any Azia sns. orinasa logistika manokana mba hahazoana antoka fa manome serivisy lozitika haingana sy tiana ho an'ny mpanjifa izahay.
Miaraka amin'izany, manana ekipa R&D manokana izahay hamolavola vokatra vaovao tsy tapaka, hanome ny filan'ny tsena sy mpanjifa samihafa, ary hanatsara hatrany mba hampihenana ny fanaintainan'ny marary.Mba hanomezana tolotra kalitao ho an'ny mpanjifa bebe kokoa eran'izao tontolo izao, dia mandray olona manan-talenta isan-taona izahay.
Ny kalitaon'ny vokatra no tombony fototra ho anay.Nahazo ny fahazoan-dàlana famokarana sy ny fisoratana anarana momba ny vokatra ara-pitsaboana any Shina izahay, ary koa ny ISO13485, CE, FDA ary fanamarinana hafa.
Ny mpiasa rehetra ao amin'ny vondrona superunion dia manantena ny hifanome tanana amin'ireo orinasa ara-pitsaboana manerantany amin'ny alàlan'ny ezaka tsy an-kiato ataontsika.
Fifandraisana aminay:sales@ysumed.com info@ysumed.com+86 13601443135
Manome serivisy 7 * 24 ora izahay.